Mabhuku eKisimusi. Sarudzo | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhoroondo yezvinyorwa, Mabhuku, Novela, Nyaya
Hezvo izvo, kukona kona. Zvakare Navidad, uye yakakosha kwazvo gore rino zvakare yakakosha asi imwe iyo yatinotarisira kuti haizombodzokororwa. Zvekare zvakare unofanirwa kugadzira iyo kusarudzwa kwekuverengwa zvenguva ino kune akawanda mabhuku akakumikidzwa. Izvi ndezvangu ne Spanish Spanish, uye vatorwa vanoda Rilke, Andersen o Stevenson, mune nyaya uye dzimwe nyaya dzeKisimusi.
1 Zuva reMadzimambo. Nhoroondo dzeKisimusi - Francisco José Gómez Fernández
2 Tsamba kuna amai vangu zveKisimusi - Rainer Maria Rilke
3 Advent paGomo - Gunnar Gunnarsson
4 Fir -Hans Christian Andersen
5 Chipo cheKisimusi - Robert Louis Stevenson
Zuva reMadzimambo. Kisimusi ngano - Francisco José Gómez Fernández
Nhau naPardo Bazán, Valle-Inclán, Taboada uye zvimwe zvekare
Isu tinoziva zvishoma - kana pamwe zvirinani kutaura kuti tine tsika diki- ye Nhau dzeSpanish dzeKisimusi. Asi zviripo. Uye mubhuku rino mamwe akaunganidzwa muchimiro che nyaya zvakare, sekuratidzwa mumusoro wenyaya unotakura.
Saka tine vanyori vakaita Becquer, Emilia Pardo Bazán, Valle-Inclán kana Azorín, kuwedzera kune vamwe vasinganyanyozivikanwa saRamón de la Cruz, Ruiz Aguilera kana Alarcon. Ivo vese vakanyora ipfupi Krisimasi-themed nyaya kwavakabata ndangariro dzemhuri, zvakaitika kana kuomarara kwehupenyu.
Tsamba kuna amai vangu paKisimusi - Rainer Maria Rilke
Nyanduri ane mukurumbira wechiGerman Rainer Maria Rilke yakachengetedza yakakosha uye isina kumiswa Kisimusi tsamba naamai vake, Sophie Entz, kubva muna 1900 kusvika muna 1925, gore asati afa.
Aya mavara anomira kune avo zvinyorwa zvakafanana uye inzwi, kunyangwe paine hukama hwakanyanya kunetsa nyanduri aive naamai vake Izvo zvakanyorwa nekunakisa kukuru uye zvine, semuenzaniso, zvinobata zvechivimbo chepedyo zvakanyanya senge siginecha yemunyori: "René". Zvakare, uye gore rega rega, ivo vaviri vanodzokorodza kuzvipira kwavo kufunga mumwe kune mumwe panguva yechitanhatu masikati pazuva rakatarisana neKisimusi. Iyi tsamba haana kumbomiraKwete kunyange panguva yehondo.
Kuuya kugomo - Gunnar Gunnarsson
Iri basa rakashandurwa mumitauro inodarika gumi uye iri yakakurumbira munyika dzakaita Alemania y United States. Izvo zvakatove zvakataurwa kuti yakafuridzira Hemingway kunyora Chembere negungwa uye kuti Walt Disney aida kumuendesa kumafirimu. Uye munyori waro, Gunnar Gunnarsson, ndiye mumwe wevanonyanya kunyora mabhuku eIcelandic 1955th century. Muna XNUMX akasarudzwa kuNobel Prize yeMabhuku.
Ndicho pfupi pfupi, gara mune zvisina kuchena chando kubva kumakomo ekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva Islandia. Iyo protagonist, iyo Mufundisi Benedikt, anotanga chiitiko chake chetsika che Advent nokuti kununura kubva kuchando kune avo makwai yemakwai akarasika uye akagadzirirwa imwe kufa. Unoperekedzwa kukosha kwake kukuru, imbwa yake negondohwe, Anopinda mugomo rine chando asingafungire kuti, panguva ino, a mhedzisiro zvisingatarisirwi.
Mhemberero --Hans Christian Andersen
Zvimwe zvekare zveKisimusi, saka haugone kupotsa anonyanya kuzivikanwa wechiDanish munyori wenyaya uye ngano: Hans Christian Andersen. Nyaya iyi yakatanga kubudiswa muna 1844 uye inotiunzira nyaya ye muti chii chakadaro kuda kukura uye uwane zvinhu zvikuru zvaunokanganwa kurarama runako rwekanguva. A kunakirwa zveipapo Kisimusi nezvakatipoteredza zvakatangira kuratidza, uyezve mugore rino, nezve kukosha kwekurarama zuva nezuva uye kunakidzwa nezvauinazvo.
Chipo cheKisimusi - Robert Louis Stevenson
Imwe yakasarudzika yawakaverenga pane chero zuva ndiStevenson, uyo akanyora izvi mbiri dzenyaya dzinotyisa yeKisimusi ese ari maviri, panenge pakupera kwehupenyu hwake.
In the primera kwavari tine protagonist, Markheim, uyo anoenda kuna chitoro chekare kutenga chipo Kisimusi. Uye zvinoitika kwaari imomo mumaawa anotevera zvichachinja zvachose magumo ake.
Uye mu segunda un chirungu officer, uyo anorwira mukati España panguva ye Hondo yeRusununguko, anoenda kumunda kuti awanezve. Iye anozviita mu Matumba iri pakati pemakomo nenzvimbo dzinonakidza. Ikoko achaedza kutsvaga makiyi e rudo uye nyaya inotyisa uko kwepanyama nekunamata kunenge kusingaenzanisike. Ose anosangana muzita remukadzi asinganzwisisike: Olalla.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku eKisimusi. Sarudzo
Yakanyanya kusarudzwa sarudzo. Ndatenda !!
Kwakanaka kuumbiridza uye basa rekuongorora. Sarudzo yakabudirira kwazvo yemabhuku muchiSpanish.